Mamorona mpisolo vava amin'ny marika amin'ny Zuberance | Bilaogy MarTech
Zuberance, sehatra fampiroboroboana ny media sosialy, milaza fa manome vahaolana:
Zuberance dia miasa eo amin'ny tobim-pahalalan'ny marika amin'ny alàlan'ny fametrahana fitaovana fihainoana ara-tsosialy sy ny fanolorana fanadihadiana haingana, hamantarana hoe iza amin'ireo mpanjifa no mety ho mpisolovava amin'ny marika, ary vonona hanome toky ny marika eo amin'ny sehatra sosialy. Izy io avy eo dia manome ireto mpanjifa ireto amin'ny fampiharana efatra manokana: Advocate Review, Advocate Testimonial, Advocate Answers, ary Advocate Offers, izay ahafahan'izy ireo mandefa tolo-kevitra momba izay haino aman-jery sosialy misy.
Ny marika dia mahazo tombony amin'ny fomba maro kokoa noho ny fahitana fotsiny. Ohatra, ny mpanjifa mampiasa ny fampiharana Advocate Offer hizara antsipiriany momba ny tolotra vokatra amin'ny namana manova namana ho mety hitarika ho an'ny mpivarotra. Toy izany koa, ny mpanjifa manana Advocate Answers dia mamaly ny fangatahana vokatra mifototra amin'ny zavatra niainany, izay handresy lahatra ny mpividy ho avy fa tsy ny mpandraharaha orinasa manome valiny mitovy.
Ny Zuberance Advocate Analytics dia manara-maso ny valiny amin'ny fotoana tena izy mba hamantarana ny mombamomba ny mpisolovava amin'ny alàlan'ny demografika sy ny hetsika, ary manome ny marika amin'ny fampahalalana momba ny fanadihadiana amin'ny doka tsotra hahafantarana azy. Zuberance dia manana fijoroana vavolombelona vitsivitsy amin'ny tranokalany izay azonao jerena raha tianao ny mahita ny fomba ampiasana ilay sehatra eo amin'ny sehatry ny asanao.
Zuberance dia manome ireto rindrambaiko ireto na miankina, na manolotra azy ireo ho toy ny ampahany amin'ny vahaolana feno turnkey izay mahatafiditra ny lafin-javatra rehetra amin'ny fanentanana mpiaro ny marika. Ny fahombiazan'ny Zuberance na fitaovana hafa mamela ny orinasa hamadika ny mpanjifa ho Brand Advocates dia miankina amin'ny fananana mpanjifa mety ho eo am-piandohana. Ho an'ity dia tsy misy ny hitsin-dàlana mankany amin'ny hatsaran'ny vokatra na serivisy ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsy misy tomika.
Tags: fisoloana vavafangatahana mpisolo vavafanentanana amin'ny marikampisolo vava marikafahitana ny mpanjifaWomteny vava
Yext: Serivisy toerana iray hitondrana azy rehetra